Soo saaraha Nalalka Laydhka & Shidaalka | Ming Feng
Sidee MF u soo saartaa?
Sidee MF u soosaaraa guri?
Sidee MF u soo saartaa qalabka?
Sidee MF rinjiyeynta?
Sidee Mf Shirka?
Sidee MF u qabtaa?
Sidee MF Fals Linns?
Sidee MF u qabtaa SmT chip?
Sidee Qolka MF u shaqeeyaa?
Gudaha Led Light
Led jirridda Iftiinka
Nalalka Nalalka Hoggaaminaya
Laydhka Saqafadda Led
Bannaanka Led Light
Iftiinka Beerta Led
Laydhka Caddaynta Led
Laydh Daaroosho Laydh
Laydhka Deck Led
Mashruuca Ileyska Dugsiga ee Awstaria
Super Market Light Mashruuca Kanada
Mashruuca Light Tunnel ee Australia
Mashruuca Light Stadium ee Koonfur Afrika
Mashruuca Lighting Parkement Light ee Japan
Mashruuca Light Street ee Talyaaniga
Mashruuca Light Warehouse ee Jarmalka
Mashruuca Faraska Iftiinka ee Faransiiska
Mashruuca Light Hotel ee Poland
Mashruuca Mini Down Light In Brazil
Waqtiga Lead Lead
Nidaamka Tayada ee Iso9001
Kooxda Saadka Xirfadeed
Adeegga Naqshadeynta Fudud
Sidee MF u soo saartaa lens lens?
Sidee MF u qabtaa caaryada caaryada?
Sidee MF u qabtaa CNC iyo prosing?
Sidee MF u qabtaa gabowga?
Sidee MF maamusha bakhaarka?
Sidee MF rinjiyeynta rinjiyeynta?
Booqashada Macaamiisha Bangladesh Mf
Israel Booqasho Mf
Netherland Booqasho Mf
Barnaamijka Tababarka Mf
Mf Booqo Gz Lightingfair
Injineerada Mf Ayaa Booqday Eu
Tababarka Mf ee Hz
Khariidadda Wadada Mf Sanadka 2021
Macmiilka Japan Booqasho Mf
Booqashada Qandaraaslaha Talyaaniga Mf
Mf Ciyaar Kubbadda Cagta
Mf Daawasho Wacan Bbc
Nidaamka wax soosaarka MF waa ISO9001 Shahaado leh, Naga soo wac
Qiimaha Warshadda-Tayada ISO
MAXAA SABABA MF?
1. Laydhka 'Mingfeng Lighting' wuxuu leeyahay qalab koronto oo dhameystiran oo loo yaqaan 'LED light' marka la eego nidaamka kormeerka tayada, nidaamka MF wuxuu qabtaa shaqada ka hor wax soo saarka, habka wax soo saarka, iyo nidaamka kormeerka adag sida ku xusan AQL soo saarida ka dib. Dhammaan laydhadhka 'MF LED' waxay qaadanayaan tijaabinta 100%, iyo baaritaanka gubanaya oo aan joogsi lahayn 48 ilaa 72 saacadood
2. Sida xirfadle nalalka LED soo saaraha leh waayo-aragnimo 15 sano ah marka la eego naqshadeynta, soo saarista iyo dib-u-hagaajinta, Warshadeenna waxay ku takhasustay jumlada nalalka hogaaminaya, iyo badeecadeena caadiga ah waxay bixisaa muddo dammaanad qaad ah oo 5 sano ah, qaar ka mid ah evan wax soo saar ayaa bixiya muddada dammaanadda 10 sano shuruud ahaan ku xiran mashruuca
Baahida macmiilka. Waqtiga hogaaminta ee muunad qaadashada waa 1 toddobaad, iyo 2 toddobaad usbuuc jumlad ah.
3. Istaraatiijiyaddeena warshaddu waa inaanan ku lug lahayn jumladleyda, qeybiyeyaasha, ganacsatada, iyo dhinacyada kale ee saddexaad, taas awgeed, Ming Feng Lighting Co., Ltd oo soo saare xirfadle ah ayaa leh faa iido weyn qiimo / tayo / waxqabad. Dhammaan alaabooyinka waxaa si toos ah looga soo diraa warshad MF.
4. Ming Feng Lighting Co., Ltd waxay leedahay koox injineero karti ku leh R
D, iyo injineero xirfadlayaal caalami ah oo iibiya si loo ilaaliyo isgaarsiinta si habsami leh, MF waxay siisaa adeegyo nashqadeynta nalalka LED-ka macaamiisheena qiimaha leh. Iyada oo ku xiran mashaariicda macmiilkayaga, kooxda injineerkeenu wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan khadka wax soo saarka, samee xisaab xisaabeed marka loo eego ROI (Dib-u-maalgelinta Maalgashiga) sida ku cad sawirrada mashruuca, iyo ROI oo bixinaya qorshooyin tamar-badbaadin ah si loo yareeyo kharashka nalalka loona hubiyo in laydhku Soo-celinta maalgashiga ayaa ka yar 1.5 sano (xaaladaha qaarkood, maalgashiga iftiinka waxaa lagu soo celin karaa 1 sano gudahood iyadoo lagu saleynayo xaaladaha mashruuca).
Iyadoo aanu jirin nin dhex dhexaad ah, waxaad kaheli doontaa qiimaha warshad si toos ah MF. Macaamiilku had iyo jeer waxay kujiraan booska ugu fiican suuqa maxalliga ah iyagoo la shaqeynaya warshaddeena.
Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu soo saaraa 100% nidaamka ISO, dhammaan noocyada mashiinnada caqliga leh waxay leeyihiin tayo tayo sare leh 200% si wanaagsan loo fuliyo. Nidaamka hubinta tayada ayaa shaqadooda ku qiimeeya sida ay indhaha u hayaan.
1 toddobaad usbuuc amar ah.
2 toddobaad amar aad u tiro badan.
3 toddobaad oo ah shayga la qaabeeyey.
5 sano oo loogu talagalay nalalka dibadda ee LED-ka
10 sano oo loogu talagalay iftiinka iftiinka banaanka (Xaalad ahaan)
Damaanad waa damaanad
Waxaan soo saarey iftiin in kabadan 10 sano
Nalalka Gudaha ee Gudaha
1.LED Panel Light Nalalka 2.LED Down Light 3.LED Track Light 4.LED Triproof Light 5.LED High Bay Light 6.LED Track Light
7.LED Saqafka Iftiinka 8.LED Wall Light 9.LED Linear Light 10.LED Spot Light
1.LED Daadka Iftiinka 2.LED Iftiinka Sare Sare LEH 3.LED Stadium Light 4.LED Street Light 5.LED Garden Light
6. Iftiinka Caddaynta LED. 7. Iftiinka gidaarka ee LED-ka 8. Iftiinka daboolka LED 9.Laydhka Tunnelka Laydhka 10. Iftiinka Iftiinka LED
ECO waxay horseeday nalka daadadka
Iftiinka fatahaadka ECO waxaa loo qaabeeyey buundada, aagga macdanta, dekada warshadaha isboortiga iyo dekada badda. Qoyskan wuxuu ku sugan yahay tayo sare iyo waxqabadka iyadoo la kaashanayo naqshadeynta naqshadeynta iyo qaybaha heerka adduunka, 5 sano damaanad sida had iyo jeer.1. Kala-saaridda Hill-ka Held:① Wareejinta iyo sumaddaNalaxdu waxay qaadataa iftiin muuqaal ahaan u muuqda, iyo dhidibka sumadda ee isha iftiinka leh ee loo qaybiyo sumcadda iftiinka leh waxaa lagu rakibay dhidibka iftiinka; Qalooca qalooca ee la sumaddayn ee nalalka noocan oo kale ah waa mid xoogan.Marka laambadda noocan oo kale ah lagu iftiimiyo hal laambadood, oo ah meel elliptical ah ayaa laga helaa dusha sare ee iftiinka, iyo iftiinka aan sinnayn; Si kastaba ha noqotee, markii nalalka laambada badan, dhibco iftiinka ayaa midba midka kale ku sujuudayaa, kaasoo soo saari kara saameyn ku qanacsan. Tusaale ahaan, boqolaal laambadood oo si qurux badan u saham ah ayaa badanaa loo isticmaalaa garoomada, kuwaas oo lagu rakibay munaaradaha dhaadheer ee agagaarka garoonka si loo helo iftiin sare oo iftiin sare iyo saameynno iftiinka sareeya.② Laba qaabab diyaarad oo summad lehQalooca loo saxo qalooca nalka noocan oo kale ah waxay leedahay laba diyaaradood oo summad leh. Nalalka badankood waxay qaataan sumcadaha 'Cyrindrical' oo summad leh, oo isha iftiinka toosanna waxaa lagu rakibay dhidibka cirifka.③ Safka diyaaradda summetericalQalooca qalooca ee laambada ee laambada ayaa leh hal diyaarad summeteristi ahaan. Iftiinka waa in laga dhigaa milicsiga asymmetric-ka ama milicrada sumcadda leh ee loo yaqaan 'cyrindrical' oo lagu daray grids si loo xadido iftiinka * ee caadiga ah waa goynta muuqaalka ka goynta iftiinka. Qaybinta noocan ah ee noocan ah waxay ka heli kartaa qaybinta iftiinka lagu qanco oo leh hal laambadood.④ Foomka asymmetricQalooca qalooca ee la sumaddayn ee nalalka noocan oo kale ah ma laha diyaarad summad leh. Waxay inta badan qaadataa nalalka khafiifka ah ee isku dhafan noocyo kala duwan oo ilo ah oo leh kala duwanaansho ballaaran oo ah qaybinta xoojinta iftiinka iyo nalalka khaaska ah ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo shuruudaha khaaska ah ee meesha loo adeegsado.2. Sifooyinka laambadda sadarka ah ee Leed:La laalaanada saadaalinta ee ugu badan ee loo yaqaan 'LED' ayaa adeegsada awood-sare oo awood sare leh (shey kasta oo horseedi ah oo leh lens wax ku ool ah oo laga sameeyay PMMA, oo inta badan loo adeegsado in iftiinka uu soo saaray, taasi waa, dib-u-fiiriye); Dhowr shirkadood ayaa dooranaya 3W ama xitaa awood sare oo sare u qaadaya oo ay sabab u tahay tikniyoolajiyadda kuleylka kuleylka wanaagsan. Nalalka saadaasha ee hogaamiya waxay ku habboon tahay munaasabadaha, dhismayaasha iyo nalka kale.
Sidee Ji shaybaarka shuqullo lahayn?
waxyaabaha nalalka LED ay si dhow u la xiriira ammaanka gaarka ah ee macaamiisha.Waa in aan loo xoojiyo waxbarashada iyo cilmi sharciyada shisheeye iyo xeerarka, si adag loo xakameeyo tayada alaabooyinka LED iyo baabbi'iso khataraha ka iman kara baxsiga;Xoojinta iskaashiga hay'adaha imtixaanka dhinac saddexaad oo soo saarayaasha qalabka baaritaanka xirfadeed, ula socdaan tayada oo dhan links-soo-saarka ee alaabta,iyo socdo geeddi-socodka oo dhan ka design sheyga, wax soo saarka, geeddi socodka muhiim ah, ogaanshaha article ugu horeeyay ee la dhammeeyayna kormeerka sampling soo saarka.shirkadaha keentay waa in fiiro gaar ah u tayada wax soo saarka iyo waa in aan ka maqnaan fursad horumarinta sababtoo ah dhibaatooyin tayada. Sida ganacsi nalalka ama qalabka taageerada qeybiyaha, qalabka baaritaanka ama qorsheyaasha waa in la fahamsan yahay!
Sidee Ji kabida, samayn
Ming Feng Best Sidee kabida-qeybiye, shahaado Universal awood our suuqa dunida dhex gelin wax soo saarka si xor ah, macmiilka dajiyaan karaa warshad-Ji xawaaro sahlanaato weyn.Mashiinka waxaa loo isticmaalaa in la ogaado alxanka dusha sare ee warbaahinta kala duwan, taas oo ah geedi socod isbedelka jirka. Waa midda koowaade, dhamaadka madaxa silig dahabka ah waa in loola dhaqmo si ay u sameeyaan gudbikaraa ah (Ji isticmaalaa negative cadaadis electron sare si ay u sameeyaan gudbikaraa a), iyo dusha biraha welded marka hore loo preheated doonaa; Markaas, ka yar tallaabada wadajirka ah ee waqtiga iyo cadaadis, kubada silig dahabka soo saarta lahayo ku caag ah on dusha alxanka biraha, si labada warbaahinta gaari karo xiriir la isku halayn karo, iyo iyada oo loo marayo gariirka khilaaf ultrasonic, bond biraha waxaa la aasaasay dhexeeya labada atamka biraha hoos tallaabada xidhiidhka qaaradda, si ay u ogaadaan alxanka ee silig dahab hogaanka. Ji alxanka kubada silig dahab ka sareeyaa Silicon silig aluminium alxanka in qaab korontada iyo codsiga deegaanka, Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah weldment la biraha qaali ah waa in hore loo kululayn jiray, kala duwan codsiga la yara koobto.
Waa maxay habka loo yaqaan 'Powder Coation'?1, Nidaamka Dubitaanka rinjiga, hanaanka rinjiga ee loogu talagalay dad badan ayaa u maleynaya in dubitaanka rinjiga ay tahay daaweynta habka, dhab ahaantii, lama qaldami karo. Ficil ahaan, in lagu dubiyo rinjiga waxaa la dhihi karaa inuu yahay labadaba daaqad iyo hanaan. Nidaamka dubitaanka rinjiga ee faahfaahsan waa sida soo socota: Waqti kasta oo rinji ah ayaa lagu dabaqayaa substrate, waxaa loo diraa qolka dubitaanka side ee heerka-dheredka ah ee qallajinta, kaas oo lagu soo celiyo saddex jeer, afar jeer ama ka badan.2, Habka loo dubi doono Nidaamka dubista rinjiga Qolka dubista rinjiga qolka dubista rinjiga waa nooc ka mid ah qalabka warshadaha. Qaab dhismeedkeedu wuxuu qaataa qaab dhismeedka kulanka. Jidhka qolka wuxuu ka kooban yahay ilmaha iyo hooyada oo ku dhejisa-ku-dhex-dhexaadka kuleylka iyo boodhka lagu buufiyo kuleylka ah, kaas oo leh wanaagga wanaagsan iyo waxqabadka kuleylka. Waxaa jira albaab ka shaqeeya qolka si loo fududeeyo marin u helka shaqaalaha. Waxaa sidoo kale lagu qalabeeyay alumininium alfoy-ga isku xidha, oo albaabkuna wuxuu ku qalabaysan yahay daaqadaha kormeerka. Shaqadiisa ugu weyn waa in la sameeyo hanaanka dubitaanka rinjiga.3, ugu dambeyntii, si isdaba joog ah ugu buufiyaa hormuudka hore 3-5 jeer. Ka dib buufin kasta ka dib, Polish rinjiga dubista ee wejiga sanqadha iyo maro kacsan. Rinjiyeynta ka dib, taabo dusha sare ee laambada dubista gacantaada gacanta si aad u aragto haddii ay jiraan walxaha iyo xumbada. Dusha sare ee nalalka dubista rinjiga waa inay ahaadaan kuwo siman oo jilicsan oo aan lahayn walxaha aan lahayn dareen aan caadi ahayn.4, nidaamka rinjiga rinjiga, buufin 1-3 jeer oo rinji dhalaalaya oo dhalaalaya, ka dibna ku kari heerkulka sare si aad u xoojiso lakabka rinjiga. Taas ka dib, ku dhaji shay adag. Dusha sare ee dubista rinjiga waxay ka madax banaanaataa dildilaac, filim rinji daran oo ka dhacaya, maqaarka cad ee ka dhacaya iyo waxyaabaha aan caadiga ahayn, iyo filimka dubitaanka rinjiga ah si caddaalad ah uma caddeyn doono.
Ming Feng Laydhka Co., Ltd.
Mingfeng Laydhka Co., Ltd. waa soo saare laydh LED ah oo la aasaasay 2006.
Khadkeena wax soo saar waxaa ka mid ah nalalka dhiraynta LED-ka, nalalka sare ee LED-ka, Nalalka saqafka sare ee warshadaha LED-ka, Nalalka gudiga LED-ka iyo nalka hoose ee gudaha ee aan biyuhu la socon Wax soosaarkeena waxaa si balaaran loogu isticmaalaa nidaamyada iftiinka balaaran ee loo isticmaalo beeraha waaweyn, warshadaha, iskuulada, buundooyinka, tunelada, dekedaha, garoomada diyaaradaha, iyo codsiyo kale oo badan. Mingfeng wuxuu ku takhasusay tayo sare leh laydh horseed ah. Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeenna.
Waxyaabaha Nalalka Iftiimiya
Wadanka loo adeegayo
Dhacdo Run ah
Mashruuca iftiinka faraska faraha
Iftiinka daadadka Mf waa shay kaamil ah oo iftiiminaya iftiinka faraska, macmiilku wuxuu jecel yahay laambaddeena aad u badan, iftiinka tayada habeenkii ayaa ku raaxaysanaya nolosha maalinta oo dhan.RaceCourse wuxuu u baahan yahay inuu ku qalabeysnaado nalalka ku habboon wadada fardaha, maxaa yeelay marka nalka la ruxruxo indhaha faraska, waxay kordhin doonaan halista faraska dhabarka fardaha, sidaa darteed waxaad ubaahantahay inaad ubaahantahay xagal iftiinka.La laayado Qoyska ee Feng Feng Airforce Lights Laydhka Stadium waxay ku badali karaan laambada birta oo leh isku mid ah cabirkiisu yahay 1: 2, ka badbaadinta tamarta in ka badan 60%, iyo yareynta qalabka qaybinta. Nolosha adeegga waxay gaari kartaa in ka badan 60000 saacadood waxaana damaanadku yahay 10 sano. Marka la barbar dhigo birta birta ilo iftiin leh nolosha adeegga celcelis ahaan 3000 ~ 5000 saacadood, soo noqnoqda dayactirka ee laambada ayaa si weyn loo dhimayaa, si loo badbaadiyo kharashka dayactirka. Isla mar ahaantaana, laambada halogen-ka caadiga ah waxay bilaabmaysaa muddo dheer, waxayna qaadataa 30 daqiiqo in la soo celiyo nalka haddii meesha ay si shil ah u lumiso awooda oo ay soo celiyaan korantada. Laydhka leyfka ayaa la shidi karaa oo gabi ahaanba laga fogaanayaa dhibaatada haysata muddada-dheer ee carqaladeynta kadhaca ah ee ku dhaca korantada shilka.Saddex qaab oo naqshad ah oo isku-dhafan, hagaajinta dabacsan, hagaajinta toosan iyo hagaajinta toosan ayaa la ogaan karaa, iyadoo cabirkoodu yahay, iftiinku wuxuu daba socdaa wadnaha.Habab badan oo rakibaadda ahWaxay ku habboon tahay goobo isboorti oo waaweyn, koorsooyin baraf ah, koorsooyin golf ah, koorsooyin orod fara badan, koorsooyin tababar faras ah iyo meelo kale, oo si buuxda ayey u buuxiyaan baahiyaha warbaahinta HD ee dhacdooyinka guriga iyo dibedda.Maanta, oo leh kor u kacaya dhaqdhaqaaqa qaran, nalalka orodka, waxay noqdeen cunsur muhiim u ah soo bandhigida ugufiican ee dhammaan noocyada dhacdooyinka isku-dhafka ah. Maaddaama ay tahay suuqa sawirka ee iftiinka daba-galka ee dhamaadka, iftiinka Ming Feng ayaa sii wadi doona kor u qaadida r& D iyo hal-abuurka lagu muujiyey badeecadaha nalalka, ku dadaalo abuurista ifaya tamarta lagu keydiyo iyo nabaad-abuur ku habboon, oo ay sameeyaan dadaal joogto ah oo ku saabsan horumarinta warshadaha iftiinka ee orodka
Dhigashada baarkinka Japan
Saldhigga Baarkinka Japan waxay isticmaashaa iftiinkayaga Triproof oo iftiiminaya 150lm / W, waxay badbaadisaa in ka badan 60% biil ka mid ah biilka, waxay ka dhigeysaa inuu kaxeeyo heerka sare marka la dhigto sagxadda hoose marka la dhigto sagxadda hoose marka la dhigto sagxadda hoose marka la dhigto meel lagu dhigto.Dhanka kale, MF waxay bixisaa tuubbo caqli gal ah oo leh xalka mikrowave-ka microwave-ka si loo dhigto baarkinku sidoo kale.Xaaladda hadda ee baarkinka dhulka hoostiisa ah: nalka gawaarida dhulka hoostiisa ayaa liita, dhibaatadii nalkana waxay ahayd mid ka jajaban soosaarayaasha iyo isticmaaleyaasha, inta badan dhinacyada soo socda:1. Garaash dhulka hoostiisa ah waa meel aad u madow. Hadeysan jirin nal-nuujinta waqtiga, shilalka waa ay fududahay in la dhacaan. Intaa waxaa dheer, qulqulka dadku aad ayuu u yar yahay, kaas oo inta badan siiya xaalado ku habboon dambiilayaasha waana aag daciif ah oo maareynta amniga.2. Nalalku waa qaali. Laydhka Guud ee Garaash wuxuu u baahan yahay 24 saacadood oo shaqo ah, oo ah lacagta korantada ee sanadlaha ah waa wax badan.3. Tirada nalalka garaashku waa weyn yahay, iyo culeyska shaqada ee beddelaad iyo dayactirku waa mid ballaaran, taas oo dhib ku ah maaraynta hantida.Xaaladda hadda ka hor isbadalkaTuubbada iftiinka ee hogaaminta iftiinka leh waxay si guul leh u xallisaa is burinta inta udhaxeysa nalka joogtada ah ee nalalka garaashka dhulka hoostiisa iyo keydinta awoodda, iyo hufnaanta korantada ee korantada ayaa ah ilaa 85%. Lambarka garaashka caqliga leh ee loo yaqaan 'laambada garaashka'Microwave radar laxiriira laambada laambada loo yaqaan 'Radar Radar' ayaa adeegsada mabda'a Dopler-ka si loo gudbiyo calaamadaha-soo noqnoqda ee 'Microwave'. Ka dib aqoonsiga caqliga iyo socodsiinta, calaamadda iyo samaynta korantada oo ay wadaagaan Foomka Radar Microwave Beeraha ku hindisa korantada iyo si otomaatig ah. Lambaarka garaashka ayaa si caqli leh u ogaan kara jawiga elektaroonigga ah ee ku xeeran oo si otomaatig ah ula qabsiga gobolka shaqada.Radaawaha Radar wuxuu horseeday laambadAstaamaha shaqada ee 'Microweve radar ay ku dhufatay laambada:Markii qof ama gaari uu dhaqaaqo, jihada garaashka dareenka ah ayaa 100% buuxa, awoodda shaqadu waa 18W, oo dhalaalkuna waa laba jibaar oo ah 40w laambad. Marka lugeeyayaasha iyo gawaarida gawaarida, ka dib markay dhacaan 25 ± 5 ilbiriqsi, oo ah in laambada radar ay si toos ah ugu beddelayaan xaalada ugu wanaagsan ee 20% dhalaal buuxa, iyo celceliska awoodda guud ee shaqada aan ka badneyn 5w. Iftiiminta markay waxyar ifadeeyso waxay si buuxda u buuxin kartaa baahiyaha amniga, la socodka iyo nalka. Haddii qof ama gaari uu ku dhaqaaqay aaggan, laambaddii ku dhexjirtay aaggan had iyo jeer waa 100%. Dareenka radarga ee garaashka galka garaashka qalooca iftiinka qaadka ayaa daboola 360 digrii oo ka hooseeya nalka, masaafada dareenka ahna waa 6-8m. Taasi waa, aagagga leh radius oo ah 6-8 mitir dadka iyo gawaarida maadaama xarunta ay udub dhexaad u tahay.Jaantusyada Nidaamka ee Rabshadda RadarFaa'iidooyinka microwave radar radar lagu soo rogay laambad rar ah1. Si otomaatig ah u faham walxaha dhaqaaqaysa sida dadka iyo gawaarida, oo aad siiso iftiin munaasib ah oo waqtigeeda loo baahan yahay. Dadka iyo gawaaridu way yimaadaan oo ay u baxaan dhammaan dhalaalaya, dadka iyo gawaaridu waxay si toos ah u seexdaan, si otomaatig ah u seex, oo ka saar nalka aan tooska ahayn, oo gabi ahaanba beddela cimilada "iftiinka dheer" ee 24-kii saacadood ee la soo dhaafay.2. Codsiga isha iftiinka ee iftiinka ee jilbaha ka soo baxa rarku wuxuu siinayaa faa'iidooyinka laxiriira laambadaha la soo saaray: nolosha adeegga dheer, waxtarka iftiinka dheer, mug yar iyo xakameyn fudud iyo xakameyn fudud. Waxay ka fogaadaa faa'iido darrooyinka nalalka caadiga ah: Ma jiro wax nal ah oo nal ah oo ay sababaan heerkulka sare ee joogtada ah, ee ah waxtarka sare ee keydinta awoodda, badbaadinta wax badan oo dayactir gacmeed iyo beddelaad ah, iyo si otomaatig ah. Soo-galitaanku wuxuu keenaa ku habboon.
Mashruuca Stadium Stadium Stadium Stadium
Warshadda Feng Fengl ee Fudud Fengl ayaa ku dhameysatay mashruuca South Africa Stadium Stadium Stadium, macaamiisha ayaa isbedelay nalalka hore, waxay badbaadinaysaa biilka korantada si weyn.Sida uu qabo qofka mas'uulka ka ah mashruuca casriyeynta iyo dib-u-dhiska ee garoonka isboortiga ee Johannesburg (ciyaaraha gudaha), fiidkii ka dhacay Juun 22, oo ah qaybta dhismaha ee ka-saaris ah sideed udgoon ah, oo laba nalal ah Tijaabi. Kadib markii nidaam kale oo kor loogu soo dejinayo maalintii Juun 23, dhammaan siddeedda nal oo dhami waxay ahaayeen 6:30 pm Juun 23. Laga soo bilaabo rakibidda nalalka iftiinka ee garoonka isboortiga ee magaalada Johannesburg Olombikada ee Johannesburg, Stadium-ka xarunta isboortiga waxaa lagu qalabeeyay sideed "Big Mac" oo ah 53 mitir oo ka mid ah 53 mitir oo jidhka ah, oo lagu daray 2 mitir oo ah hillaac usha, oo miisaankiisu yahay 19 tan. Qaadashada ayaa la dhammeeyay bishii Maajo, iyo nooc kasta oo nambo ah iyo jirradu miisaanku miisaankiisu yahay 4 tan, mugga noocaas oo ah 8-da qaadida 8-da qaadista ee naqshadaynta isboortiga ee iftiinka leh ayaa dhif ka ah dalka.
Xalka iftiinka suuqa ee Kanada
Mashruuca Suuqa Suuqa Sap Sap Sabtida ayaa la soo gabagabeeyey sanadka 2016, mashruucu wuxuu u baahan yahay saameynta iftiinka indhaha ee lagu qabto si uu u soo jiito feejignaan badan oo macmiil ah marka la dukaameysto ... in la sii wado.Iyada oo caan ku ah warshadaha internetka, ee loogu talagalay shirkadaha waaweyn, waa labadaba fursad iyo caqabad. Waxaa la soo waramayaa in qeybtii hore ee 2016, ma aysan jirin shirkado badan oo suuqyo ah oo gaara ku guuleysiga laba-koriin iyo macaash. Sidaa darteed, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la buuxiyo baahiyaha kooxaha macmiisha oo kaladuwan oo leh nooc ganacsi oo kaladuwan, iyo tayada iyo khibradda suuqyada waaweyn sidoo kale ay ka muhiimsan yihiin.Nalalku waa mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee suuqyada waaweyn si loo wanaajiyo tayada oo ay kordhiso dareenka khibradda. Iftiinka waaweyn ee suuq-geynta ayaa u baahan iftiin iyo hooska. Iftiinka iftiinka iyo u dhigma ee caqliga leh waxay hagaajin kartaa waayo-aragnimada macaamiisha iyo kor u qaadida raaxada; Iftiinka Ming Feng wuxuu siiyaa xalka laydhka loogu talagalay suuqyada kaladuwan ee takhasuska gaarka ah, oo kor u qaadi kara dhadhanka alaabada la soo bandhigay, oo kordhin kara awoodda wax iibsiga iyo hagaajinta guud ee suuqyada waaweyn.Iftiinka waaweyn ayaa guud ahaan loo qaybiyaa saddexda qaybood ee soo socdaNalalka dharka ee isbarbar dhigaya: Waxay ku siin kartaa iftiin wanaagsan oo alaab ah shelf; Heerka adeegsiga iftiinka ayaa sarreeya, laakiin iftiinka booska iyo isku-darka ayaa liita, oo aan ku habooneyn hagaajinta madaxa tuubada.Nalalka tooska ah ee tooska ah: Waxay ku siin kartaa nal wanaagsan meesha bakhaarka, oo leh isku mid ahaansho sare, laakiin iftiinku waa keli, iyada oo aan lahayn dareen xidhmo ah, iftiinka badeecada kuma filnaNalalka toosan ee toosan: Waxay ku siin kartaa nal wanaagsan meesha bakhaarka, oo leh isku mid ahaansho sare, dareen adag oo heer iftiin leh, iftiinka badeecada sare, laakiin waa in fiiro gaar ah la yeesho.Feejignaanta macaamiisha waxay u badan tahay in ay soo jiidato aagagga leh jawiga iftiinka wanaagsan. Kaliya bey'ad mugdi ah ayaa arki kara aag ifaya. Geedi socodka naqshadeynta iftiinka oo dhan ee suuqyada waaweyn ee nolosha, iftiinka oo dhan waa furaha. Ka dib markii la go'aaminayay xiriirka ka dhexeeya iftiinka iyo hooska, xakamaynta nalka ayaa si gaar ah muhiim u ah. Goobta iyo rakibidda nalalka waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan ku habboonaanta rakibidda iyo dayactirka, dib-u-habeynta iyo xakamaynta iftiinka isla waqtigaas. Qaababka muujinta kala duwan, laambadaha iftiinka waa in si macquul ah loogu isbarbar dhigaa.
Fadlan Ku Reeb Xiriirkaaga Halkan si Injineerkeenna Iibinta uu dhowaan u joogo adeeggaaga